Global Voices teny Malagasy » Orogoay: Tolo-dalànan’ny Governemanta Hanaovana Ho Ara-dalàna Ny Fanjifàna Marijuana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jona 2012 0:53 GMT 1	 · Mpanoratra Silvia Viñas Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Orogoay, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka
Niteraka fanehoan-kevitra mifamahofaho ny filazana hoe manosika ny hanaovana izay hampalalaka ny famarotana ambany fanaraha-mason'ny marijuana ny governemanta Orogoaiana. Ilay tolo-dalàna dia atolotra ho toy ny fepetra hisorohana ny fanjifàna sy fanelezana ny fetanà cocaine  (“pasta base” amin'ny teny Espaniola), zava-mahadomelina tena fantatra eny anivon'ny tanora Orogoaiana.
Araka ny tatitra farany nataon'ny gazety El País  [es], hamoaka andianà fepetra 16 ny governemanta ho toy ny “ady atao amin'ny fetanà cocaine”. Milaza ny governemanta fa tomponandraikitra amin'ny fisian'ny heloka bevava maro ny fetanà cocaine, indrindra fa ny nataon'ireo tsy ampy taona. El País nitatitra fa ho an'ny fanjakana ilay tolo-dalàna dia mety, “hametraka ny varotra marijuana ho tahaka ny ‘famotsiana’ ny vola maloton'ny tsenan-java-mahadomelina, hanaisotra ampahany betsaka amin'ny tombombarotr'ireo mpikirakira zava-mahadomelina ary ‘hanisaka’ ireo mpiankin-doha amin'ny fetanà cocaine hankany aminà zava-mahadomelina maivamaivana kokoa. Tsipihan'ilay gazety ihany koa fa ny fitazonana na fampiasàna marijuana ho an'ny filàn'ny tena manokana dia tsy mahazoasazy ao Orogoay.
Manazava ny bilaogy World War -D  :
Nalaky tamin'ny fanehoan-kevitra momba ilay vaovao ireo mpampiasa Twitter. Ny sasany nankalaza ilay fanambaràna, toa an'i Vanesa Casanova (@vanecasan ) [es]:
Vao nifoha aho dia nandre kabary KANTO nataon'ny [Filoha] Mujica…”tetikasa hanaovana izay haha-ara-dalàna ny marijuana”. Mahafinaritra ‪ #BuenFeriado‬  (“manaova fialantsasatra tsara daholo”)
Ireo hafa, toa an'i Álvaro Amoretti (@aamorettivp ) [es], manontany tena hoe:
Tahaka izay, i @LalaCanessa  [es] mibitsika hoe :
Raha i Graziano Pascale (@grazianopascale ) [es] kosa tsy mahita ny fomba hivahàn'ny olana ara-pandriampahaleman'ny firenena amin'izay fanaovana ny varotra marijana ho ara-dalàna :
Hajiantsary avy amin'ny Wikimedia Commons  eo ambanin'ny Creative Commons license (CC BY-SA 3.0) 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/26/34542/
 fetanà cocaine: http://en.wikipedia.org/wiki/Cocaine_paste